Ampahafantaro ny telefaona an-tariby an-tariby an-tanety tariby tsy miovaova JWAT310-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2021-05-25 HITS: 2
1. Vandalona porofo manimba vy.
2. Fandraisana finday mavesatra miaraka amin'ny mpandray mifanentana amin'ny fanampiana Aid, mikraoba manafoana ny tabataba.
3. Keypad firaka zinc mahazaka vandaloka sy handset misy tadiny mifono vy ..
4. Miaraka amin'ny jiro LED miorina eo an-tampony, rehefa misy antso ho avy, dia hirehitra ny jiro.
5. Ny fahatsapana ny mikabary sy ny mikrô dia azo ahitsy.
8. Misy ampahany an-telefaona vita amin'ny telefaona misy.
9. CE, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka.
Mitady telefaona vonjy taitra indostrialy ve ianao amin'ny tetikasa rehetra?
Ny telefaonintsika Industrial Explosionproof telefaona an-tariby avo lenta JWAT820 dia napetraka tao amin'ny orinasa simika